င ဝန် န ဒီ: 2014
မြန်မာ့ မြေ ကို အသက်ပေး ကာကွယ်ရင်း သေဆုံးသွားသူ လက်ပံတောင်း တောင်သူမကြီး အတွက် ကမ္ဘာမကြေ နဲ့ဂုဏ်ပြုပါရစေ
မိမိရဲ့ ဘိုးဘွား အမွေ ကို အသက်ပေး သူ အတွက်
မြန်မာပြည်သားတိုင်း အမြဲဆို အမြဲဆိုတဲ့
မိမိနိူင်ငံကို မိမိ ရသလို ကာကွယ်နိူင်ပါစေ
ပုသိမ်ရှုခင်းကြည့်ခရီးစဉ် ၁၀ ယောက်စီးလေယာဉ်ဖြင့် ပြေးဆွဲတော့မည်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပုသိမ်-ငွေဆောင်-မော်တင် နှင့် ပုသိမ်- ငွေဆောင်- ချောင်းသာ- ပုသိမ် ရှုခင်းကြည့် ခရီးစဉ်အတွက်
မြန်မာ့လေကြောင်းက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က စတင်ကာ ၁၀ ယောက်စီး Grand Caravan လေယာဉ် စတင်ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ရပ်ထားသည့် ၁၀ယောက်စီး Grand Caravan လေယာဉ် တစ်စီးကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - မြန်မာ့လေကြောင်း)
ယင်းခရီးစဉ်နှစ်ခုတွင် Promotion ကာလ၌ ပုသိမ်-ငွေဆောင်-မော်တင် ခရီးစဉ်အတွက် တစ်ဦး ကျပ် ၃၀၀၀၀၊ ပုသိမ်- ငွေဆောင်- ချောင်းသာ- ပုသိမ် ခရီးစဉ်အတွက် ၂၅၀၀၀ ဖြင့် ပျံသန်းပြေးဆွဲမည်ဟု နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် ရန်ကုန်- ပုသိမ် ခရီးစဉ်ကို Grand Caravan လေယာဉ်ဖြင့် ပျံသန်းမည်ဖြစ်ကာ သုံးသောင်းကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်- ပုသိမ် ခရီးစဉ်အတွက် ရန်ကုန်မှ နံနက် ၈နာရီတွင် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ပုသိမ်မှ ရှုခင်းကြည့် ခရီးစဉ်များကို သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့များတွင် ခရီးသည်လိုအပ်ချက် ရှိသလောက် ပျံသန်းပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:50 AM No comments:
တလုတ်စားဖူး သူ့ ကျေးဇူးမသိတတ်သူ
ထမင်းကျွေးမိလို့ထောင် တစ်သက်ကျနိူင်သည်
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:39 AM No comments:
IOs 8 မြန်မာလို နောက်တစ်မျိုး ဇော်ကြီး အခမဲ့ပါ
safari ကနေ zawgyi ကိုသွင်းပါ
ttkeyboard ကို Apple Store မှာအခမဲ့ပါ
Black keys လောက်စာလုံးမစုံတာပါ
အိုင်ဖုန်းတွေ အိုင်ပက်စ်တွေ ဂျေးဘရိတ် ဖောက်တာ တရားဝင် ဥပဒေက ကာကွယ်ထားပြီးသားပါ
ပိတ်ပင်ထားတာတွေ ကို့ နည်းပညာ နဲ့ ဖွင့် တာဆိုပြီး ခွင့်ပြုထားတာပါ
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:11 PM No comments:
လ ကမ္ဘာ ကပစ္စည်း နိူင်ငံ အမည်မရေး
မြန်ပြည်မှာ လ ပေါ် အလည်သွားမယ့် သူနဲ့ 
လ ကမ္ဘာ ကပစ္စည်း မှာရောင်းသူ နဲ့ ပါ
မြန်ပြည် အဝင် စစ်ဆေးသူ တွေ က လ ပေါ်လည်း မရောက်ဖူး
လ ပစ္စည်း အမှတ်တွေအသားတွေ လည်းသိတာမဟုတ်
လ မှာ နိူင်ငံ မှ မရှိတာ နိူင်ငံ အမှတ် တံဆိပ် ဘယ်ပါ ပါ့မလဲ
လ စီးပြီးခရီးသွား သူတွေ သာသိသည့် ကိစ္စ
လ ပစ္စည်း မြန်ပြည် တံဆိပ် ရိုက် ထုတ်လုပ်သည်ပေါ့
မြန်ပြည်သား တွေ အတုအပ ဘေးဝေးပါစေ
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:12 AM No comments:
မြန်မာ ကီးဘုတ် မြန်မာစာ ကို iOs 8 မှာထည့်လို့ ရပြီ
ပြီလျှင် Settings သို့ သွား
General သို့ သွား
Keyboard add ကို လုပ်ပါ
Black keys ကိုရွေးပါ
ပြီးမှ Burmese ကို ရွေးပါ
မြန်မာကီးဘုတ်နှင့် မြန်မာ လိုရေးလို့ ရမှာပါ
မြန်မာလို ပေါ်စေလို လျှင်
General ထဲက language and regions ကို
Burmese လို့ ရွေးပြီး
မြန်မာ ပြောင်းက မြန်မာလို ပေါ်လာပေမည်
မြန်မာလို ရအောင် လုပ်ဆောင်သူများအားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
လွတ်လပ်ရေး သို့ မဟုတ် ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ်ရေး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့် ဒီမိုကရေစီ လားလားမှ မဆိုင်
ဒီမိုကရေစီ ဆိုပြီး ကုန်းကုန်းအော် နေတာတွေ ထဲမှ လွတ်လပ်ရေး ကို ဒီမိုကရေစီ နည်းအရ ဆိုတာတွေ လုပ်လာလို့ရေးတာပါ..
လွတ်လပ်ရေး က လွတ်လပ်ရေးပါ
ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ်ရေး ဖို့ ပါ.
ဒီမိုကရေစီ နဲ့လားလားမှ မဆိုင်ပါ...
နမူနာတခု ဆိုရရင် ကလေးတစ်ယောက် မုန်းစားချင် တာ ကို သူလွတ်လပ်ရေးလို့ ဆိုရအောင်
ဒီနေရာမှာ အိမ်သား က ၅ ယောက် ဒါ ကို ဒီမိုကရေစီ အရ မဲ ခွဲ ရင် အဲဒီကလေး မုန့် စားရဖို့ဘယ်လို မှ မဖြစ် နိူင်ပါဘူး
အဲဒါ ဒီမိုကရေစီ လား မဟုတ်ပါဘူး သူ့လွတ်လပ်ရေး က မုန့် စားဖို့ဆို မုန့် စားရရေး က အဓိကပါ ဒါဆိုတော့ သူ့ လွတ်လပ်ရေးက သီခြားကြီးပါ...
ဒါကြောင့် သူ့ လွတ်လပ်ရေး ကို သီးခြားခွင့်ပြုရမှာပါ မုန့် စားရရေး ကို သာ သီးသန့်ကူညီရမှာပါ..
ပြီးမှ မိသားစု နဲ့အတူတကွ စားသုံးရေး ကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်သင့်တာပါ..
ဒီစာတွေ ရေးလို့ဒီစာ အခုတော့ အရာ ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး
သာဓက ဆိုရရင် တချိန်က ရေးခဲ့တဲ့ ဂိမ်းကစားပွဲ အမှန်တရား က ၂၀၁၁ က အခု ၂၀၁၄ ကျမှ အမှန်ဖွင့်ရေးတာ တွေ့ ရလို့ ပါ...
၂၀၁၁ တုန်းကရေးတုန်း က အရမ်းသတိထားရေးခဲ့ရတာပါ သိတာ ကို မသိသလို ဂိမ်းကစားပွဲ အရှုံးနဲ့ ကစားခြင်း ဆိုပြီးရေးတာ အခုလည်း ဒီလိုပါပဲ
ဒီစာ က နောက် ၁၀ နှစ်လောက် ကြာမလားပဲ ဒီစာတွေ ရေးတတ်ဖို့အသိပညာ ရခဲ့တာတွေ သင်ခဲ့ရတာတွေ က စင်ကာပူ မှာ စာသင် လာတဲ့ အကျိုးကြောင့် ရေးနိူင်တာပါ..
အခုလည်း ကြည့်ရင် လွတ်လပ်ရေးတောင်းတာတွေ ကို ဖိနှိပ်တာတွေ ဒီမိုကရေစီ နည်းတွေ ဘာတွေ ဆိုပြီး လုပ်တာတွေ တွေ့ လို့ ရေးရတာပါ
အဲလိုတွေ အလုပ်ကောင်း လို့ကမ္ဘာမှာ လူမဆန် လူသတ်မှုတွေ တွေ့ နေရတာပါ..
စနစ်တကျ ဖြေရှင်းတာတွေ စိတ်ဓာတ် အမှန် နဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေ ရှိဖို့ လိုနေတာပါ
လွတ်လပ်ရေးဆို လို့လွတ်ထွက်သွားအောင် လုပ်နေတာတွေ ထက် သီးခြား လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးပြီး အတူတကွ ပူးတွဲ နေထိုင် ရေး UNITED ကို လုပ်ဖို့လိုနေတာပါ...
UNION ဆိုတာတွေ က နောက်တော့ မလွယ်တာတွေ့ ရပါတယ် UNIှTED ကတော့ အမြဲတမ်း အတွက် မှန်နေတာပါ..
UNION ကို ဆက်သွားချင်ရင် အဲဒီ နယ်မြေ က လူတွေ ကို သီးခြားလေးစားဖို့လိုပြီး လွတ်လပ် ခွင့် ကို ပေးလိုက် ပြီးမှ အတုတကွ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်း ကို လုပ်ရမှာပါ...
လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုလို့ပြိုကွဲတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ထက် မိမိသမိုင်းမိမိရေးတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ဒါ ကို မပြိုကွဲ ပဲ လုပ်ဖို့က အနည်းငယ်ခက်မှာပါ
တကယ်တော့ လွတ်လပ်ခွင့် အရ အဲနေရာက လူတွေ ကို နေရာစနစ်တကျ ချပြီး ကိုယ်တိုင်ရေး သမိုင်းမျက်နှာစာ ဖွင့်ခွင့် ပေးလိုက်ရမှာပါ..
ဒါဆို UNION လည်းမကွဲ ကိုယ်သမိုင်းလည်း ကိုယ်ရေး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ပိုင်ခွင့် လေးပါရပြီး လွတ်တော် မှ အတူတူ တိုးတတ်ရေး အနာဂတ် သမိုင်းကောင်းလာမှာပါ...
ဒါကြောင့် နေရာတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ အတိုင်း ကုန်းကုန်း မအော် ပါနဲ့ 
သမိုင်းကို သမိုင်း အတိုင်းရေးနိူင်ကြပါစေ...
သမိုင်း ကို ပိတ်မထားပါနဲ့သမိုင်း ကို အရည်ဖျော် လို့ရတယ် ဆိုပေမဲ့ 
သမိုင်းက မှတ်တိုင် တွေ တစ် တိုင်ပြီး တစ်တိုင် စိုက် နေမှာပါ...
တိုင်တိုင်း မှာ ဖျောက်မရတာတွေ ရှိနေမှာပါ...
လွတ်လပ်မှု ကို အသိအမှတ်ပြုပါ ရောမချပါနဲ့ 
လွတ်လပ်ရေး စာလုံး က ဖိနှိပ်သူ အတွက် တန်ဖိုး မရှိပေမဲ့ ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်ခွင့်လေး က ဘာနဲ့ မှ မတူပါဘူး
အတူတူ လက်တွဲ ရတာတွေ အများကြီးပါ
သမိုင်း တိုင်း ရာဇ၀င် တွင် စေရမည်...
ရာဇ၀င် တိုင်းလွယ်လွယ် မဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ သက္ကရာဇ်တွေ ကို ဖြိုဖျက် နိူင်သူပါ
လွတ်လပ်ရေးတိုင်း ကို လေးစားစွာဖြင့်..
ဂျပန် iphone6,iphone6Plus တရုတ်ပွဲစား Apple ဆိုင်ရှေ့အမြတ် ယန်း၃သောင်း ၄သောင်း ပေးပြီးဝယ် ညနေ ၃ နာရီ အရောင်းရပ်
ဒီနေ့iphone6Plus SIM free လေး ၀ယ်လို့ ရမလား ထင်နေတာ ညနေ ၃ နာရီ က အရောင်းပိတ်သွားတယ် ဆိုလို့ထူးတယ်လို့ ထင်နေတာ
ညဘက် TV ကြည့်တော့မှပဲ တရုတ်ပွဲ စားတွေ က ကားရပ်ပြီး ချက်ချင်း အမြတ် ယန်း ၃ သောင်း ၄ သောင်းပေးပြီး ၀ယ်သွားတာ သတင်းသမား က လိုက်မေးလို့မရတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်
အဲဒီကားပေါ်မှာ နောက် အဖုံးထဲ မှာ အပြည့် နောက်ကားတစီးကအလယ်တခါးဖွင့်ရတဲ့ ကား က ခုံပေါ် မှာ အထပ်လိုက် တွေ့ လိုက်ရတယ်...
ဂျပန်မှာနေပြီး အမှန်တကယ် ဂျပန် မှာ သုံးချင်သူတွေ အတွက် တော့ ညနေ ၃ နာရီကျော် က အရောင်းပိတ် လိုက်ပြီ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်မှာ ဖုန်းတန်းစီ ရောင်းစား တာ ကို တွေ့ လိုက်ရတာ အံ့သြစရာပါ..
ဂျပန် ရဲ ကတော့ ဒီ အတိုင်းကြည့်နေ မှာလား နောက် ၃ ..၄ လ လောက်ကြာအောင် သေချာအောင် လုပ်ပြီးအဖြေ ထွက်လာမှာလားတော့ မသိ..
ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုးနဲ့ ဆို iphone6Plus ကတော့ ခပ်ဝေးဝေးမှာပေါ့
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:05 AM No comments:
သမ္မတ ပြောတဲ့ မြေယာ ဆရာဆရာမ ပီတိ စားသုံးဆဲ ဆည်းဆာ
သမ္မတ မြေယာ ပြောလို့ဒီစာ ကို သေချာအောင် လုပ်ပြီးမှ ရေးတာပါ...
ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူ ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ...အနာဂတ် မြန်ပြည် ပညာရေး နောင် အနှစ် ၅၀ လောက် နောက်ကျ မည့် အဖြစ်ကို ရေးတာပါ..
မြေယာတွေ ပေးတာ တွေ သိမ်းတာတွေ နောက်ကွယ် က အကြောင်းအရာတချို့ ရှိနေတာပါ...
စီမံကိန်း ဆိုတာနဲ့မြေသိမ်းလို့ ရတာ က တကယ် ကို ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလို လက်ခံနေ တောင်းခံနေ ပေးနေတာ တွေ ပြီးရင် ဘာမှ မလုပ်ပဲ ရောင်းစား ပေါင်စား မြေယာ ပြဿနာ မြောက်မြားစွာ ဖြစ်နေတာ က
ပေးသူ ကို ပြင်ဆင် စေလို က ပညာအခြေခံ လိုလာပါပြီ ပြင်ချင်ရင် ၁၀ နှစ်ကြာ စေမည့် မြန်ပြည် ပညာရေး ဖြစ်နေမှာပါ..ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ နည်းပညာ မရှိ အတွေးမရှိ တဲ့ အသိပညာကြောင့် မြေယာကို အသုံးချရေးသာ လုပ်နေရလို့ ပါ...
မြေယာ တစ်ခု ကို နည်းပညာ အနာဂတ် ပါတွက် မှ နောက် မှာ အကျိုးဖြစ်မှာပါ..
နိူင်ငံတစ်ကာမှာ လေယာဉ်ကွင်းတွေ တစ်ကွင်းပြီး တစ်ကွင်း ဆောက်တဲ့ နိူင်ငံ မရှိပါဘူး
ရှိတာ ကို စနစ်တကျ နည်းပညာမြှင့် တိုးချဲ့တာသာ ရှိတာပါ..
လက်ခံရယူဖို့ တောင်းခံသူ တွေ ရှိခြင်း က အခွင့်ထူးခံ စိတ် ဆိုတာထက် ထိုးဖောက်ရန် နည်းသစ် ကျန်ဆ ခြင်းမဲ့ အတွေးသစ် မရှိခြင်းလည်း ပညာရေး အတွေးဆွေးမြှေ့ နေခြင်း ကို တွေ့ နေရမှာပါ..
နေရာတစ်ခု က ကျဉ်းနေတာ ကို ဘယ်လိုဖောက်ထွက် လုပ်ဆောင်မလည်း ကို သိရမှာပါ..
တစ်ခုခု ဆို ထိန်ချန် လုပ်စားစနစ် နဲ့ ကြီးပွားနေရတာ က အမှား ကို အမှား ဖုံးရင်း ရှေးလမ်းေ၀၀ါးနေတာပါ..
ဒီလိုနေရာမှာ အစိုးရ နှစ် ပေါင်းများစွာ ပညာရေးလုပ်လာသူတွေ ၀န်ထမ်းတွေ ကို မြေယာချပေးတာတွေ ရှိနေတော့
ရသင့်လို့ ပေးတာတွေ လုပ်တာလို့ တွေ့ ရပါတယ် နည်းပညာ နည်းတော့ အိမ်မဆောက် ပေးနိူင်မြေယာပေးတာနဲ့ဆရာဆရာမ တွေ ကျေနပ်စရာ လို့ထင်စရာပါ..
ဒီနေရာမှာ ပီတိစားဆဲ ဆည်းဆာ ဆိုတာက
ပီတိ က လက်ဆုတ်လက်ကိုင် မပြနိူင်သလို ဆည်းဆာ ဆိုတာကလည်း နေ၀င်ချိန် စောင့် နေရတဲ့
ဆရာဆရာမ ဘ၀ တွေ က လက်ဗလာချည်းသက်သက် တွေ့ နေရလို့ 
သေချာအောင် အထပ်ထပ် လုပ်ပြီး
ဖြေရှင်းစရာနည်းလမ်းမဲ့အထောက်အကူမဲ့ ဖြစ်တာတင် မက နောက် အနာဂတ် မှာ အမွေမဲ့ အာစရိ အကြောင်း ဖြစ်လာ လို့ ပါ..
ပညာရေးအတွက် နှစ် တွေ ရာစုနှစ် တစ်ဝက် ရင်လေးစရာပါ..
အစိုးရပေးသော အိမ်ယာ မရသော ဆရာဆရာမ ဆိုလို့စီစစ်ပေးသူ မဲ့အဖြစ်ပါ..
အစိုးရကပေးသော အိမ်ယာ ဆိုလို့စလစ် ကလေးတစ်ခုရယ်ပါ..
ငွေတော့ ပေးသွင်းလိုက်ရပါရဲ့ 
တကယ်တမ်းမေးလိုက်တော့ အခြေခံပညာက လည်းတာဝန် မယူပေးပဲ မြို့ နယ် ကို လွဲချ နေတော့ အစကပျောက် အထက်က တာဝန်မယူတော့ အောက်ကငြင်း
မြေယာဌာန ကဖျောက် လုပ်ဆောင်သူက ဖျောင် လိုက် တာဆိုပေမဲ့
ဒီနေရာမှာ လုပ်ဆောင်သူ ကရောင်းစား တာ ကို ပညာရေးဌာန က တာဝန်ယူ မဖြေရှင်းနိူင်တာ လာဘ်စားထားလို့ လား
မြေစာရင်း က ပိုင်ရှင်မဟုတ်ပဲ လက်လွဲ ရောင်းခွင့် ခွင့် ပြုနေတာလား လာဘ်စားပြီး လုပ်ပေးနေတာလား
အစိုးရ အမွေ လို့ ပြောရတဲ့ မြေယာ လေး ဆရာဆရာမ က မရလိုက်ပဲ နာမည်သာ ခံလိုက်ရတယ်
နှစ်ပေါင်းများစွာ မြေဖြူမှုန့်ကိုရှု စာသင် လာသူ အစိုးရ အမွေမဲ့အဖြစ် ဆည်းဆာ မှာ တွေ့ နေရတာပါ..
ဒီအချိန် မှာတွက် ရင် ..တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အရ ကြည့်ရအောင်
လုပ်ဆောင်ခွင့် ရသူက ရောင်းစား တာ ကို အမှုဖွင့် ပြီ ထားပါတော့
ပညာရေးဌာန က တာဝန် မယူတော့ အမှု ကတ၀က် လောက် အလိုလို ရှုံးပြီးသား နောက် ဆက်ကြည့်ရအောင်
မြေစာရင်းကလည်း လာဘ် ယူပြီး စာရွက် အတု ကို အစစ်ဟန် ကို မသိဟန်ဆောင် ရောင်းစားခွင့် ပြုတော့
နောက်ထပ် ၂၀% ထပ်ရှုံး ပြီပေါ့
တရားရုံးတို့ဘာတို့ ဆိုတာ ဆရဆရာမ တွေ အတွက် လားလား မ မဆိုင် တကယ်ပါ သူတပည့် တစ်ယောက်က မေးရင် အမှန်တရား အတွက် တရား လာ လုပ်တာ ကို တပည့် ကို ပြောဖို့ခက်ပါတယ်
ဒီတော့ တရားရုံး ကရော ဆရာဆရာမ ဖက်ပါဖို့စလစ် ကလေးတစ်ခုနဲ့မဖြစ်နိူင် အငြင်းခံ ရဖို့က ၃၀ % ဆိုတော့ ကဲ အရှုံးကြီးပဲ...
ဆည်းဆာ ချိန် အသက်ကလည်း ၇၀ နီးလာနေပြီ နေ၀င်ချိန် မစောစေဖို့တရားရုံးလည်း မသွားရအောင်
တပည့်တွေ ကိုလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမမြင်ရအောင်
အမူလည်းမလုပ် မြေယာလည်းမရ အစိုးရ အမွေမဲ့ မြေယာ ပီတိစား ဆရာဆရာမ ဆည်းဆာမှာ နေပျော် အောင်နေနေရတာပါ..
မြေယာရသူ ဆရာဆရာမ အတွက် နိူင်ငံတော် အမွေ ပြသစရာ ရှိပေမဲ့
နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ပြီး မြေယာ မရသူ ဆရာဆရာမ တွေ အစိုးရ အမွေ မရတာထက်
နောက် မျိုးဆက် ဆရာဆရာမ တွေ ပီတိမစား ရက်စက်တာတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ ရေးတာပါ..
သမ္မတ ပြောတဲ့ မြေယာ တော့ မသိ လောလောဆယ် ဆည်းဆာ မလှတာထက်
နောက်မျိုးဆက် စေတနာမဲ့ ပီတိ နတ္ထိအဖြစ်တွေ က ရင်လေးစရာပါ...
မြေယာ က စာရင်းထဲမှာသာ. အချိန်မရွေး ကူးပြောင်းပေးနိူင်တာပါ ကိုယ်တိုင်မလို စနစ် ထက်စလစ် ဖျောက်ဖျက် နိူင်သူတွေပါ..
ပညာရေးဆိုတာထက် ပ ဆိုတာ က ပထုတ်တတ်ရေး စနစ် ကို အကောင်အထည်ဖော် ရင်း ညာတုတ် ရင်း ညာစာရင်း လုပ်နေရင်တော့
ကျောင်းမနေ ရတဲ့ ကလေး တွေ ရင်လေးရတာထက် မကောင်းမှု ထပ်မတတ်မှာတော့ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့
နောက်ဆုံးတော့ နေ၀င်ဆည်းဆာ ပီတိစားရင်း လူတိုင်းလှတာထက်..
မိမိ အပိုင်းမိမိ တာဝန်ယူနိူင်သူတွေ ဖြစ်နိူင်ကြပါစေ...
နေ၀င် ချိန် ဆည်းဆာ မှာ တိမ်တောက်တာ ကို မြင်ခွင့် ရနိူင်သေးရင်ပေါ့
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:57 AM No comments:
Apple က စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် ၁၀ နာရီ
Apple က စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် ၁၀နာရီ လို့ ပြောပါပြီ.
ဂျပန် မှာကတော့ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီ ကနေ ၄ နာရီ အထိပါ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:36 AM No comments:
ခေါင်းပေါ်ရေခဲလောင်းစိန်ခေါ် သူတွေထဲ ၁၈ နှစ် လူငယ် သေဆုံး
တကယ်တော့ ဒီလို အလုပ်တွေ လုပ်တာ ကောင်းကျိုးဆျုးကျိုးတွေ ကိုတွက်ထားဖို့လိုပါသည်
ရေခဲရေ အအေး အမှတ် က သုည အမှတ် မဟုတ်ပေမဲ့ သုည နီးပါး လုပ်ပြီး မှ လောင်း ကြတာပါ ခေါင်း အတွင်း က အပူချိန် က ၂၀ အထက် မှာ ရှိပါတယ် ... အပူ အအေး အပြောင်း အလဲ က ကောင်းကင် ပေါ် မှာတောင် မိုးရွာ တာ ကို ၃၀ ကွာခြား ရင် ရေခဲ မိုး အဖြစ် ပြောင်းပြီှး ရွာတာပါ...
အလောင်းခံရတဲ့ သူ က အခန်းအပူချိန် ပုံမှန် ၃၀ က အထက် ဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားထားသူ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တွင်း အပူချိန် က အလိုလို နေရင်း ၃၀ နီးပါးဖြစ်နေပြီး
လောင်းမည့် ရေခဲရေ က အနုတ် ၃ လောက် အောင် လုပ်ထားရင် အတံင်းပိုင်းမှာ အပူ အပြောင်းအလဲကြောင့် ခဲသွားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ခဏ ရပ်သွားတာမျိုး ရေခဲရေ က အပါင်း ၂ လောက် ကိုယ်တွင်း အပူ က ၃၀ အထက် တော်ကျော်နေရင်...ခဏ ရပ်သွားတဲ့ အပြောင်း အလဲ ကြောင့် မည်သူမဆို မရဏ ကို စိန်မခေါ် နိူင်ဖြစ်သွားမှာပါ
အများ အကျိုး မသယ်ချင်သူလား
တွေးခေါ်တတ်သော အသိပညာ မသင်ခဲ့ရသူလား
မိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်း မရှိသူလား
သေဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ရင်တော့ ဆန်ကုန်မြေလေး သေချာအောင်ထပ်စစ်လိုက် သို့တည်းမဟုတ် သူတစ်ပါး ကို ဒုက္ခ ပေးသူ ဆိုရင် လုပ်ပါ...
သူတစ်ပါးစိန်ခေါ်ရင် မိမိ ကိုယ်တိုင်ပါ... လူပိုအဖြစ်စဉ်းစားပြီး အလုပ်လက်မဲ့ အဖြစ်နဲ့ မရဏ မင်းဆီ လျောက်လွှာ တင်ပြီးမှ လုပ်ပါ
လုပ်သူတွေ တော်တော်များများကလောကမှာတော်တော် များက အသက်ကြီးပြီး အချိန်ပိုသူတွေ သူများဂုက်သွေးစုတ် ကျော်ကြားချင်သူတွေပါ
ဒီမှာတော့ ခါးနာရင် ခါး ကိုရေခဲရေလောင်းပြီး လျှင် သက်သာအောင်လို့လုပ်နေကြပါ..အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိူင်ပါစေ.
၂၀၁၅ မတိုင်မှီ ဆင်းရဲသား ဖော်ထုတ် မှုအဆုံးသတ်စေရန်
ဒီမိုကရေစီ မြေသိမ်း သောသူတွေ က
ဒီမိုကရေစီ ရေပိုင်နက်သိမ်းသူတွေ က
လေပိုင်နက် ကိုပါ လာဘ်စားထားသူတွေ
အရာရာကို ဒီမိုကရေစီယောင်ယောင် လုပ်ချင်နေသူတွေ အတွက်
မြေလိုချင်လို့မြေတောင်းသူတွေ က မြေသိမ်းသူ ကို မြေသိမ်းပေးပါက ဒီမို ကရေစီ နည်းနဲ့သိမ်းနေတာလား ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးနေတာတွေ
လယ်တွေ မလုပ်နဲ့ တော့ ပေါင်မုန့် စား ကြေးနီဝါး တာ အကောင်းဆုံး လုပ်နေတာတွေ ပါ
မိုးကြိုးမျို ရေပေါ် ကူး မြို့ သစ် ဖော်
လုပ်နေသူတွေ က ကားဆိုလည်း ရေမလွတ်ကား တွေ များများသွင်း ကားကျပ်သရောင်လုပ် လိုတာ က မြန်ပြည်မိသားစု အတွက် လို တာက
ရေလည်းလွတ် လူ ရ ယောက် စီး တွေ ကမှ ကား လည်း နည်းနည်းပဲလို ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အဆင်လည်းပြေ ဖြစ်မှာ ကို
တစ်အိမ် လူ ၇ ယောက် က ကား ၃ စီး သွင်း ရ မလိုအပ်ပဲ ၀ယ်နေရ..
ထော်လာဂျီ ပါမစ် ၂၀၁၅ မတိုင်မှီ ဘယ် လို ရအောင် လုပ် ရမလဲ စဉ်းစားနေသလားတော့မသိ..
ဆင်းရဲသား တိုက်ဖျက်ရေးထက် ဆင်းရဲသား မွေးထုတ်တဲ့ စနစ် ကို ရပ်နိူင်ပါစေ...
လူနေစရာသိမ်း နေအိမ်သိမ်း လယ်သိမ်း
စားစရာ ရှာမရအောင်လုပ် မြစ် မှာ တ၀မ်းတခါး စားစရာ ရှာမရ.
လုပ်စရာမရှိအောင် လုပ်ထား အကာအကွယ်မဲ့ ၀န်ထမ်းဘ၀
စစ်ဆေးမှုမဲ့ မှတ်ချက်မဲ့ အလုပ်မလုပ်နေရာတချို့ 
ဥပဒေလို ပြဠာန်း နိူင်သော လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘွဲ့ လက် မှတ်ပါ သိမ်းလို့ရတဲ့ လုပ်ငန်း က
ဥပဒေ ပြသူ တွေ ထက် အစွမ်းထက်နေသလား
ကျွန် လုပ်ခိုင်းလို ရတဲ့ လုပ်ငန်း က ပြဠာန်းထား တာ ကို ပတ်သက်တဲ့ ၀န်ကြီး ဌာန က မကာကွယ် နိူင်တာ လုပ်အားခ ထက် အဆ ၁၀၀ နီးပါး ဥပဒေလို စည်းကမ်း က အဲ ဒီ ၀န်ကြီး ဌာန မလို သလို လုပ်နေတာတွေ က
ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်း ဥပဒေ အသစ်တွေ အစိုးရ အထက် မရှိစေချင် လို့ ရေးတာပါ..
အစိုးရ အထက် လွတ်တော် အထက် မှာ ရှိနေတာတွေ နိူင်ငံတော် ကို တရားဝင် ဖျက်ဆီးတာ ကို ဒီမိုကရေစီ မှာ မရှိသင့်တော့ပါဘူး
နိူင်ငံသားတိုင်း နိူင်ငံကောင်းကျိုး လုပ်ဆောင်သင့် တာ မြန်ပြည်သားတိုင်းတာဝန်ပါ..
ဒီမိုကရေစီ ကို လူတိုင်းရေး ရမှာပါ..ဒီမိုကရေစီ ဖျက်ဆီးသူ နိူင်ငံ ဖျက်သူ ဒီမိုကရေစိ နည်း နဲ့ ကာကွယ်နိူင်ပါစေ..
၂၀၁၅ က ရွေးကောက် ပွဲ ရှိမှာလား ရှိရော ထူးခြားလာလေမလား
အခုအခြေအနေ အရဆို ၂၀၁၅ အတွက် ပြည်သူတွေ ရဖို့က ဘာမှ ကို မရှိတာတွေ့ နေရပါပြီ
စစ်အစိုးရလက်ထက် က ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲ အခမဲ့ ကြည့် ရပြီး အ ခုတော့ လူတန်းစားတချို့အတွက် ဆိုပြီး
ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး ငွေယူ လုပ်စား တာ ကို အုပ်ချုပ် သူမပြောရဲ မဆိုရဲ
တကယ်တော့ အစိုး ရအထက် က လူတွေ တော်တော် များနေတာပါ အစိုးရကြောက်ရသော မီဒီယာ ဖျော်ဖြေရေးတွေ ပါ
ထိုင်းတောင် စစ်အစိုးရ ဆိုတော့ အခမဲ့ ...မြန်ပြည် ကို စစ်အစိုးရ တတ်ခိုင်းရမလို ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာ တွေ့ နေရပါတယ်
တချို့ သော အခြေအနေတွေ ကလည်း လူထု ကို ဆွနေတာတွေ တွေ့ နေရပါတယ် စစ်အစိုးရလို နေတယ်ပေါ့
နေရာအတော်များများ မှာလည်း အယူအဆ မှားလည်း လူများ မဲများသူ နိူင်စနစ် ပေါ်နေတာပါ..
တကယ်ဆိုတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိလာနိူင်ပါမလား
ရှိလာရင် ရော ဘာထူးလာမှာလည်း
ပြည်သူ အတွက် ဘာမှ မထူးလာပါဘူး ဘယ်သူ တတ်တတ်ပါ
အတိုက်အခံတတ်ရင် ထူးမလား အခြေခံ ကို ပြင်နေတာနဲ့ ပြည်သူ အတွက် ထူးခြား လုပ်တာ မတွေ့ ရတာပါ..
မြေသိမ်း တာ မတားနိူင် မတရားတာ မဟန့် နိူင်
လုပ်အားခ တောင် မလုပ်နိူင်
လုပ်ပေးလိုက် တာ ဒီမိုကရေစီ နည်းအရ ဆိုပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကြီးပေးလိုက်တာ
နည်းပညာ တွေ အနာဂတ်တွေ မမျှော်တာတွေ အခုတော့
တတိုင်းပြည်လုံး မိုးကြိုးတွေ ပစ် နောက် ငလျင်တွေ ထပ်လာမှာပါ လက်ပံတောင်းတောင်
ဘယ်အဖွဲ့ ကမှ တွက်မပြတာတွေ ပါ
မက်ကနက်တစ်ဖီးတွေ ပြောင်းကုန် ကြေးနီတောင် က မြန်ပြည် ကို မိုးကြိုး ကလွတ်အောင် သဘာဝ က လုပ်ထားပေးတာကို ဖျက်ဆီးလိုက်တော့
မိုးကြိုးတွေ ပစ်တာကို ခံကြပေါ့ မိုးကြိုးလွဲ ကြေးနီပြား ကို ၀ယ်တတ်ပေါ့
၀ယ်လို့ ရတာ ကဟုတ်ပါပြီ ရှောင်လို့ ရတာ ဟုတ်ပါပြီ
ပြေးလို့မရ ရှောင်မရတာ က ငလျင်ပါ ခါးဆီးခံ ပေါ့
ကာကွယ်ပေးသူမရှိ လက်ပံတောင်းတောင် ပေးလိုက်ပြီကိုး
အခြေခံ ကတော့ နည်းပညာ အတွေး အခေါ် မြင့်သူတွေ ကို မြန်ပြည် မှာ အသုံးချ စီမံ နိူင်သူ မရှိသေးတာပါ.. နေရာမပေးတာပါ
၂၀၁၅ မှာ မြန်ပြည် ပြည်သူ အတွက် လုပ်မည့် သူ ပေါ်ထွက် လာနိူင်ပါစေ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:46 AM No comments:
ကြွေး ရသော ချေးငွေ က ဆင်းရဲတွင်း သံသရာ
တကယ်ဆိုရင် အလုပ်အကိုင်တွေ အခြေအနေ တွေ ဖန်တီးပေးရမှာ ကို
ဂုတ်သွေးစုတ်ဖို့ကို စနစ်တကျ လုပ်နိူင်ဖို့ကြွေးပေး တာတွေ ချေးငွေ ပေးတာတွေ က
မြန်ပြည်သားတွေ ကို ဆင်းရဲတွင်း နက်စေနေတာပါ
ချေးငွေ ရပါပြီ အဲ ဒီချေးငွေ က အမြတ်ရဖို့နေနေသာ...နေစရာ မရှိလို့ 
စားစရာ မရှိ လို့ စားစရာ အလုပ်က ရတာကမ လောက် ချေးငွေ က ကြွေး အဆင့်ရောက် မပေးနိူင်တော့
ထောင်တွင်းရောက် ဖြစ်မှာ ဆိုတော့
နောက် ၃ နှစ် ၄ နှစ် ဆို ချေးငွေ ယူစရာ မလိုတော့ ပါဘူး...ထောင်က ကျွေးထားမှာ ကိုး..
နေစရာ ကို မပေး လုပ်အားခ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ကားခ မလုပ်ဆောင်နေသရွေ့ တော့
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:13 AM No comments:
မြန်ပြည်သားတိုင်း တစ်ဦးလျှင် မြေ ၂ ဧက သက်ဆိုင်ပါသည်
မြန်ပြည်သားတွေ မွေးလာကတည်း က လုပ်စရာမလို မြေ ၂ ဧက သက်ဆိုင်ပါတယ်...
အခုတော့ ကျူးကျော် မြေယာမဲ့ ဆိုတာတွေ ကြားနေရတာတွေ စီမံမှုလိုနေသော အခြေအနေ ကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ...
ရှက်တတ်သူတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုနေတာပါ...
ကားစီးပြီး ဒဏ်ကြေး မဆောင်နိူင်သော လူမိုက်တွေ လမ်းလည် ရန်ဖြစ် သူတွေ ရှိနေလို့ ပါ..
နွားစားကျက်ဝင်စားတဲ့ ခြေ နှစ်ချောင်း သတ္တ၀ါ တွေ ကတော့ များများလာတော့ နွား စာစားသူ တွေ ကြောင့်
ရိုးရိုးလူတွေ က အလိုလိုနေရင်း အဆင်မပြေဖြစ်ရတာပါ..
မြေပိုင်ဆိုင် ခွန် တန်ဖိုး အလိုက် အခွန်မကောက်သရွေ မြန်ပြည် နောက် နှစ် ၅၀ လည်း ဆင်းရဲ နေမှာပါ..
လုပ်ငန်း အခွန် မရ..
ဘာပိုက်ဆံ နဲ့တိုင်းပြည် ချမ်းသာလာမှာလည်း မြေ က ပိုက်ဆံ ပိုင်ဆိုင်မှု အလိုက် အခွန် ရမှ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတွင်းလွတ်မှာပါ..
အုပ်ချုပ်သူ အလုပ်လုပ်နိူင်ဖို့အခွန်တွေ ရမှ ဖြစ်မှာပါ..
အခွန် အလျော့မရှိ ရမှာက မြေ ပိုင်ဆိုင် မှုပေါ်ကပါ..
အုပ်ချုပ်သူ ကို အလုပ်မလုပ်သူ ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာ က အခွန် ကို မကောက်ရဲ လို့ ပါ.
. အဲလိုမှ မြန်ပြည်သားတွေ ဒီမိုကရေစီ အရသာသိမှာပါ...
နာဂစ် မုန်တိုင်း မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ ရုပ်သံမှတ်တမ်း ....(ကမ်းလင့်မယ့်လက်များဖြင့်)
Orphans of the Storm from Jeremy Williams on Vimeo.
အပိုင်း ၃ ပိုင်း ရှိပြီး တစ်ပိုင်း နှင့် တစ်ပိုင်း ခဏစောင့်ရပါသည်။ DVB မှ ၂ ရက် မေ ၂၀၁၄ တွင်ပြသပါသည်။ ကမ်းလင့်မယ့်လက်များကို ဖေးမမှုတွေ မြန်ပြည် တနံတလျား ရှိနေသေးတာတွေ ရှိနေစေဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ....၂၀၁၄.... င၀န်နဒီ
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:18 PM No comments:
ကျိန်စာ ရဲ့အနာဂတ် ဆက်ရန်
နိူင်ငံ အစွန်းရောက် မြန်ပြည် မှာ တစ်ချိန်ကျရင် ဖြစ်လာမှာ ကို ရေးမှာပါ
ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အမျိုးသား အစွန်းရောက် တို့ ထက် ဆိုးပြီး တိုင်းပြည် တိုးတတ် ဖို့ ဖြစ်လာမည့် နိူင်ငံ အစွန်းရောက်တွေ ပေါ်လာမှာပါ အခုတော့ မဟုတ် နောက် ဆယ်စုနှစ် ထက်မကကြာချင်ကြာမှာပါ
နိူင်ငံသား အစွန်းရောက် မဟုတ်ပါ နိူင်ငံ အစွန်းရောက်က သတ်သတ်ပါ
ဥပဒေ ကို စနစ်တကျ နဲ့ နည်းစနစ်တကျ ပညာတတ်တွေ ကဦးဆောင်ပေးတာထက် စနစ်တကျ နိူင်ငံ တိုးတတ်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းတွေ ကို နိူင်ငံအစွန်းရောက် တွေ ဖြည်းဖြည်းခြင်း လုပ်ဆောင်လာနိူင်ပါတယ်
ဘာသာရေး အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်တွေထက် ပြင်းထန်ပြီး နိူင်ငံအတွက် တိုးတတ်ဖို့မဖျက်ခံရဖို့သက်သက် ကိုသာကြည့်ပြီး ဖြစ်တဲ့အရာတွေ အခြေခံ ကို ရှာ ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်း ကို ဥပဒေ နဲ့ တကွ လုပ်ဆောင်ပြီး နိူင်ငံ အကျိုးဆိုတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီ နှင့်တကွ ပေါ်လာတဲ့
နိူင်ငံ အစွန်းရောက် မြန်ပြည် ဖြစ်လာနိူင်တာပါ..မြန်တာနဲ့နှေးတာပဲ ကွာမှာပါ
တစ်ခုရှိတာက နိူင်ငံအစွန်းရောက် က လူမိုက်ကြား ခေါင်းထောင်ထမကြည့် နားမထောင်တတ်တာပါ
ပညာ ကို ပညာ နဲ့လုပ်သူ နညးပညာ ကို နည်းပညာ နဲ့လုပ်တာ ကို ဥပဒေ ကို ဥပဒေ လုပ်သူ လူသစ်တွေ လက်ထဲ ထည့်ထည့် ပေး ရတော့တဲ့ အချိန် ကတော့ မလွဲ ဧကန် ဖြစ်လာမှာပါ..
နိူင်ငံအစွန်းရောက်တွေ က အဖျက် လုံးလုံးမပါ ပညာမဲ့ မပါ အဖွဲ့ တစ်ခု ကို ကိုယ်စားမပြု နိူင်ငံ ကိုသာ သီးသန့်ကိုယ်စားပြုတာထက် လူသစ်တွေ ဖြစ်နေတတ်တာ ကတော့ အံသြ စရာဖြစ်နေမှာပါ
လူသစ် အတွေးသစ်တွေ နိူင်ငံအစွန်းရောက် သက်သက်ပါ..
အချိန်တိုတို တစ်ခုမှာ တာဝန်ခဏယူ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာပါ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:59 PM 1 comment:
မြန်ပြည် အတွက် အခြေခံလစာ
နာရီ အလိုက် ငွေကြေးရှင်းတန်း
နေ့ စဉ် အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ခရီးသွားခ ကို နေ စဉ်ရှင်း ခြင်း လစဉ်ရှင်းခြင်း
ခြောက်လ တစ်ကြိမ် အပိုဆုကြေး ပေးခြင်း အနည်းဆုံး တစ်လစာ လုပ်အားခ
တစ်နှစ်တွင် နှစ်ကြိမ် အပိုဆုကြေး ၃လ အထက် အလုပ်လုပ်သူတိုင်း အပါအ၀င်
အလုပ်အ၀တ်အစား လိုအပ်သော အဆင်တန်ဆာ
ဖိနပ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စိတ်ချလုံခြုံရေး တန်ဆာများ
အလုပ်ချိန်နှင့် အလုပ်နားချိန် အချိုးကျ ခံစားခွင့် မိနစ် ၅၀ လုပ် ၁၀ မိနစ် နား တနေ့ တာ အနိမ့်ဆုံး တနာရီ နား
တနှစ် လုပ်သက်ရှိသူ ကို
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှု နှင့် တနှစ် တခါ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ပေးခြင်း
လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက် အာမခံထားပေးခြင်း
အဲလိုအခြေခံတွေ မရှိမဖြစ် ပေးကို ပေးရမှာပါ
မြန်ပြည် အလုပ်သမား ၀န်ထမ်း အတွက် ဖြေရှင်းနိူင်မှာပါ အခြေခံ မှန်ကန်သော လူ့ အခွင့်အရေး ရမှာဖြစ်ပြီး
ဖော်ထုတ်တာတွေ တောင်းဆိုတာတွေ ပျောက်ဆုံးသွားမှာပါ
မြန်ပြည်လည်း တိုးတတ် အေးချမ်းစွာ အလုပ်လုပ်နိူင်မှာပါ
လုပ်ခလစာ က အလုပ်သွားအလုပ်လာ ကားခတွေ ရထားခ တွေ အလုပ်ဝတ်တွေ ဖိနပ်တွေ အတွက် ကျန်းမာရေး အတွက် ထုတ်သုံးစရာ မလို
အလုပ်အတွက် လိုအပ်တာတွေ က အလုပ်ရှင် က ပေးမှသာ လုပ်အားကို အပြည့်ရပေမည်
အပိုဆုကြေးငွေ က စိတ်ဖိစီးမှု သက်သာပြီး မိမိတိုးတတ်မှု ကို ပြုလုပ်နိူင်ပေမည်
လုပ်အားခ က ၀မ်းခါးလှရုံ လေးနဲ့ စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်မလာသေးပါ
အထက်က တစ်ခုခု လျော့ပေးမိလို့ ကတော့
တောင်းဆိုတာတွေ ဖော်ထုတ်တာတွေ သံသရာလည်နေမှာပါ..
(မနေ့ က ရေးထားတာ ကို မြန်မာလို ပြန်ရေးထားတာပါ )
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:15 AM No comments:
The study was touted as the third great advance in stem cells --afuturistic field that aims to reverse Alzheimer's, cancer and other crippling or lethal diseases.
Hakubun Shimomura, the Japanese minister in charge of science and education, said on Tuesday that the study should be retracted now and re-published it if "they accumulate new facts" that prove its authenticity.
Stem cells are primitive cells that, as they grow, become differentiated into the various specialised cells that make up the different organs -- the brain, the heart, kidney and so on.
A key obstacle in the field is ensuring that transplanted cells are not attacked as alien by the body's immune system -- meaning they would have to carryapatient's own genetic code to identify them as friendly.
In 1998, came the first gain: the use of cloning technology -- pioneered with Dolly the sheep -- to harvest stem cells from early-stage embryos grown from the donor's own DNA.
The technique had to overcome an early hurdle of causing tumours in cells and still faces efficiency problems -- less than one percent of adult cells are typically reprogrammed successfully.
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:47 PM No comments:
The Vietnamese government said two slicks, about 15km (9 miles) long, were consistent with those that could be left by an airliner and had been detected off the coast of southern Vietnam.
Family and friends of the missing people are being cared for at Kuala Lumpur airport
At Beijing airport, relatives of missing people are being looked after atahotel
In the terminal, the arrivals board shows the missing flight in red
There has been intense media coverage in Beijing, angering some of the relatives
Vietnam's air force has spotted two possible oil slicks 190km ( 118 miles) from Malaysia, but there is no confirmation they are connected to the plane's disappearance
The plane had been flying at an altitude of 35,000ft (10,700m) and the pilots had not reported any problems with the aircraft, Fuad Sharuji, Malaysia Airlines' vice-president of operations control, told CNN.
ဒါမှ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိူင်ငံ
ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း တွေမှာ အခက်အခဲဖြစ်အောင် အလုပ်ခံရသူတွေ ကို ကရင်ပြည်နယ် က ကူညီမယ် လို့လုပ်လာတာ ဝမ်းသာစရာပါ
ကချင် တုန်းက မြန်ပြည်တနံတလျား ကူညီတာတွေ
အခု ဆို ပိုရှင်းတယ် လူသားချင်းစာနာမှု အပြည့် ပြည်ထောင်စုသားတွေ ကူညီတာကမှ
တကယ် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်စစ်စစ် မြန်ပြည်ပြည်ထောင်စု ကြီးဖွံဖြိုးတိုးတတ်ပါစေ
တိုကျိုနှင်း ကတော့ နံနက် ကနေ ညနေ တိုင်အောင်မပြီးသေးပါဘူး
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:51 PM No comments:
တိုကျို နံနက်ခင်း နှင်းတွေနဲ့ ဝေ
ညနေပိုင်း နှင်းတွေ ပိုကျလာပြီး ၂၅ စင်တီမီတာ အထိ ကျမယ်လို့ သတင်းမှာ ခဏတွေ့ လိုက်ရပါတယ်
မနက်ဖြန် အထိ ဆက်ကျမယ်လို့ လည်း ဆိုထားပါသည်၊၊
ညနေပိုင်း နှင်းတွေ ကျနေဆဲ
ပိုပိုလို့ သာ များလာတယ်
ကလေးတစ်ချို့ ကတော့ ဆော့ ကောင်တုန်းပေါ့
မြန်မာ့ မြေ ကို အသက်ပေး ကာကွယ်ရင်း သေဆုံးသွားသူ လက...
ပုသိမ်ရှုခင်းကြည့်ခရီးစဉ် ၁၀ ယောက်စီးလေယာဉ်ဖြင့်ြေ...
မြန်မာ ကီးဘုတ် မြန်မာစာ ကို iOs 8 မှာထည့်လို့ ရပြီ...
လွတ်လပ်ရေး သို့ မဟုတ် ကိုယ်သမိုင်း ကိုယ်ရေး ကိုယ်ပ...
ဂျပန် iphone6,iphone6Plus တရုတ်ပွဲစား Apple ဆိ...
ခေါင်းပေါ်ရေခဲလောင်းစိန်ခေါ် သူတွေထဲ ၁၈ နှစ် လူငယ်ေ...
၂၀၁၅ က ရွေးကောက် ပွဲ ရှိမှာလား ရှိရော ထူးခြားလာလေမ...
မြန်ပြည်သားတိုင်း တစ်ဦးလျှင် မြေ ၂ ဧက သက်ဆိုင်ပါ...
နာဂစ် မုန်တိုင်း မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ ရုပ်သံမှတ်တမ်း...
Japanese stem cell scientist calls for retraction ...
တိုကျိုနှင်း ကတော့ နံနက် ကနေ ညနေ တိုင်အောင်မပြီးသေ...